Certificate of honor (Donation) | Jewellery Luck Group of Companies 缅甸宝运集团
Home Certificate of honor (Donation)
Certificate of honor (Donation)
26ရက်​ ဇန်​နဝါရီလတွင်​ စ​နေ​နေ့ ည​နေခင်းတွင်​ Myanmar One Belt One Road အဖွဲ့ ၏ တရုတ်​နှစ်​သစ်​ကူး ​ပျော်​ပွဲရွှင်​ပွဲကို ရန်​ကုန်​မြို့သုဝဏ္ဏ​အားကစားဝန်းအတွင်းရှိ Furama Seafood Restaurant တွင်​ကျင်းပခဲ့ပါသည်​။ ဝန်​ကြီးဋ္ဌာနများမှ ဖိတ်​ကြားထား​သောဧည့်​သည်​​တော်များ၊ One Belt One Road အဖွဲ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ JL Group of Companies ၏ ဥက္ကဌ၊ တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လုပ်​ငန်းရှင်​များ၊ အဖွဲအစည်းများ၊ ဧည့်​သည်​​တော်​များ၂၀၀​ကျော်​တက်​​ရောက်​ခဲ့ပြီး ​ဖျော်​​ဖြေ​ရေးအစီအစဉ်​များ၊အကနှင့်​သီဆို​ဖျော်​​ဖြေမှုများ၊ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်​များနှင့်​​ပျော်​ရွှင်​စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်​။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ၊ မင်းကွန်းမူလတန်းလွန်ကျောင်း၏ ကျောင်းသား/သူ 154 ဦး အတွက် စာရေးကိရိယာ ၊ JL Foundation T-shirt နှင့် ဆရာ/မများအတွက် ကျောင်းဝတ်စုံလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် မှိုတောက်ကျောင်း၊ ပေကုန်းကျောင်း၊ ဟွေဟင်ကျောင်းစသည့် မူလတန်းကျောင်းနှင့် မူလွန်ကျောင်းများသို့လည်း ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
​2016年2月8日，我们的木材部为154名学生和老师捐赠了学校制服，文具和JL粉底t恤。此外，我们还将继续捐赠 Mho-tout 学校, Pay- kome 学校 & Hway-hin 学校。
Our timber extraction branch donated stationery & JL Foundation T-shirt for 154 students & school uniform to teachers of Min-gune middle school, Homemalin Township, Sagaing Division on 8th Feb 2016. Moreover, we’ll continue to donate Mho-tout school, Pay- kome school & Hway-hin school.
မြန်မာ့ရေကူးအားကစားနည်းနှင့် လှေလှော်အားကစားနည်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာရေကူးပြိုင်ပွဲနှင့် လှေလှော်ပြိုင်ပွဲများတွင် အောင်မြင်မှုများဆွတ်ခူးရရှိနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအားကစားကော်မတီကြီးကြပ်မှုဖြင့် အသစ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့အစည်းတွင် JLG မှ ပါဝင်ကူညီနိုင်ခြင်းအတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရေကူးအဖွဲ့ချုပ်တွင် နာယကအဖြစ် ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စိန် ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးသောင်းထိုက်မင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် GM ဦးစန်းဝင်းဇော်တို့ကလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလှေလှော်အဖွဲ့ချုပ
In order to develop Myanmar Swimming Sports & Rowing Sports and to achieve its goal National Sports Committee reorganize new association with JLG members.
2016 年1月21日，Golden City 向军事医院捐赠了等于3万美元的治疗癌症细胞治疗机、医院设备、空调、垃圾桶等。宝运集团的副主席 U Thaung Htike Min出席了仪式。
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း၍ အမှတ်(၂) တပ်မတော်ဆေးရုံကုတင်(၅၀၀)သို့ ကင်ဆာဆဲလ်များချေဖျက်ကုသစက်၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ အမှိုက်ပုံးများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ၌ Jewellery Luck Group of Companies ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထိုက်မင်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာသုံးသောင်းတိတိ တတ်ရောက်လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့သည်။